देउवा र पौडेलबीच बैठकमै चर्काचर्की- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबारे छलफल गर्न मंगलबार केन्द्रीय निर्वाचन समितिको आह्वानमा बैठक बस्यो । महाधिवेशनको बाँकी कार्यतालिका तयार गर्ने विषयमा सोमबार समितिको बैठकमा छलफलपछि निर्वाचन समितिले नेताहरुको समय मागेका थिए । साढे ३ बजेदेखि कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठक करिब डेढ घण्टासम्म चल्यो । बैठकमा धेरै नेता सहभागी नभए पनि बैठक लामो समयसम्म चल्यो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि आक्रोश प्रस्तुत गरेका थिए । ‘तपाईं जथाभावी बोल्दै हिँड्नुहुन्छ ? मैले कहाँ महाधिवेशन नगरौं भनेको छु ? तपाईं जे पायो त्यही बोल्नुहुन्छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।
प्रतिवाद गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले भनेका थिए, 'महाधिवेशन त समयमै गर्नु पर्‍यो नि ! विधान त मान्नु पर्‍यो नि ! तपाईं त्यस्तै चरित्र देखाउनुहुन्छ ।' यसअघि पनि पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सभापतिले महाधिवेशन गर्न नचाहेको र चुनावपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने गरी सार्न चाहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
देउवा–पौडेलको भनाभन सकिएपछि नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेताहरुको झगडा हेरेर निर्वाचन समितिलाई अलमलमा नपर्न भनेका थिए । ‘तपाईंहरु हाम्रो झगडा नहेर्नुस् । आफ्नो काम अघि बढाउनुस् । हामीले भनेको मान्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । एउटा विधिअनुसार अघि बढ्नुस्,’ सिटौलाले भनेका थिए ।
बैठकमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, सहमहामन्त्रीद्वय प्रकाशशरण महत र सुनिलबहादुर थापालगायत सहभागी थिए ।
बैठकपछि सहमहामन्त्री महतले महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकेर प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक गृहकार्य गर्ने जिम्मा निर्वाचन समितिलाई दिइएको बताए । ‘बैठक अधिवेशनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने कुरामा केन्द्रित भयो । सभापतिले स्पष्ट रुपमा निर्वाचन समितिलाई सम्पूर्ण अधिकार छ । तपाईंहरुले अधिवेशनको प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढाउनुस् । मंसिरभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । त्यहीअनुसार कार्यतालिकाका लागि गृहकार्य गर्नुस् । प्रक्रिया अघि बढाउनुस् भनेर निर्देशन गर्नुभयो । त्यो विषयमा सबैको साझा सहमति बन्यो,’ महतले भनेका छन् ।
उनकाअनुसार बैठकमा नेताहरुले निर्वाचन समितिलाई अर्को पनि निर्देशन दिए- ‘बाँकी रहेका जिल्लामा छठपछि मात्रै अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनू ।’ त्यसका आधारमा निर्वाचन समितिले फेरि पनि महाधिवेशन गराउनका लागि जम्मा ३५ दिनमात्रै पाएको छ । गएको २२ महिनादेखि प्रयास गर्दा पनि गर्न नसकेको महाधिवेशन अब ३५ दिनमा कसरी सम्भव होला त ? जबकि यसअघि निर्वाचन समितिले नै सात तहको अधिवेशन गराउन ५१ दिनको समय मागेको थियो । समितिले नेताहरुले फेरि पनि छोटो समय दिएर अफ्ठ्यारोमा पारेको गुनासो गरेका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ २०:२४